Qabiil Ka Kooban 53 Qof Oo Kali Ah Oo Laga Cabsi Qabo In Ay Gabi Ahaanba Ka Dabar Go’aan Dunida | Foore News
Home Warar Qabiil Ka Kooban 53 Qof Oo Kali Ah Oo Laga Cabsi Qabo...
Qabiil Ka Kooban 53 Qof Oo Kali Ah Oo Laga Cabsi Qabo In Ay Gabi Ahaanba Ka Dabar Go’aan Dunida
Delhi, September 14, 2020- (Foore)- Qabiil taariikh fog leh oo deggan Jasiiradaha Andamans ee ka tirsan dalka Hindiya ayaa laga helay kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus ah. Afar xubnood oo ka soo jeeda qabiilka “Greater Andamanese” ayaa laga helay cudurka Covid-19, sida uu sarkaal caafimaad BBC-da u sheegay. Labo ka mid ah ayaa la dhigey isbitaal, halka labada soo hartayna lagu karantiilay xarun daryeel.
Qabiilkan ayaa la rumaysan yahay inay ka kooban yihiin 53 qof, oo ku nool mid ka mid ah 37-ka jasiiradood ee noloshu ka suurtawdo oo ay ku xeeran yihiin deegaanno aan la gaadhin.
Jasiiradaha bariga ka xiga ee Andamans iyo Nicobar ayaa waxay diiwaan geliyeen 2,985 kiis oo Covid-19 ah iyo 41 dhimasho oo ka dhalatay cudurkaas tan iyo markii ugu horaysay ee fayraska laga helay bilowgii bishii June. Kiisaska ugu horreeya ee cudurka ‘Covid-19’ ee ku dhacay qabiilkan aadka u tirada yar, siina dabar go’aya ee Andamanese ayaa la ogaadey isbuucii hore markii dhammaan 53-da xubnood lagaga baadhay cudurka goobta Strait Island, oo u dhow caasimadda Blairir, halkaas oo ay ku nool yihiin.
Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda Caafimaadka, Dr Avijit Roy oo la hadlay BBC ayaa sidaasi sheegay. Shaqaalaha caafimaadka iyo gurmadka deg-degga ah ayaa doomo u raacay jasiiraddaasi toddobaadkii la soo dhaafay si ay usoo baadhaan qabiilkan muddo hal maalin gudaheed ah.
“Dhammaantood waxay ahaayeen dad iskaashada oo noloshoodu isku xidhan tahay,” ayuu yidhi Dr Roy. “In badan oo kamid ah xubnaha qabiilkan waxay u kala safraan inta udhaxeysa Port Blair iyo jasiiraddooda, waxaana suuragal ah in cudurka intii ay safarradaa ku jireen uu ku dhacay,” ayuu yidhi.
Qaar ka mid ah xubnaha qabiilkan ayaa xitaa ka shaqeeya shaqooyin yaryar oo magaalada gudaheeda ah. Dr Roy wuxuu sheegay in ay hadda mudnaanta koowaad siinayaan sidii loo hubin lahaa in cudurka uusan ku faafin jasiiradaha kale.
“Waxaan ilaalinaynaa oo si dhaw ula soconaynaa dhaqdhaqaaqyadooda annagoo mar walba baari doonna,” ayuu yidhi. Andamans waxay hoy u tahay shan qabiil oo nugul, qarkana u saran inay dabar go’aan, waxayna kala yihiin: Jarawas, North Sentinelese, Great Andamanese, Onge iyo Shompen.
Jarawas iyo North Sentinelese lama dhaqmaan intooda kale. Waxayna cadaw u yaqaannaan shisheeyaha oo dhan, qofna uma ogola inuu soo galo jasiiraddooda. Sanadkii 2018-kii, muwaadin Mareykan ah oo la yirahdo John Allen Chau, ayaa waxaa lagu toogtay qaansooyin iyo fallaaro kaddib markii uu isku dayay inuu halkaas soo eego. Hayadda Tirokoobta Dadyowga ee fadhigeedu yahay London ee Survival International, isla mar ahaantaana u doodda xuquuqda qabiilladaasi, ayaa sheegtay in Greater Andamanese ay ahaayeen 5,000 qof markii British-ku guumeysanayeen jasiiradahaas sannadkii 1850-kii. Muddo dheer oo ay la daalaadhacayeen saamaynta xanuuunno badan kaddib ayey tiradooda guud ahaaneed hoos u dhacday.
Sannadkii 2010, Boa Senior, oo ahaa af-yaqaankii ugu dambeeyay ee ku hadli kara luuqadaha Great Andamanese wuxuu dhintey isagoo jira da’da 85. Jasiiraddan waxaa badanaa loo yaqaan “riyada cilmi baarayaasha bini’aadanka” waana aagagga ugu badan ee lagaga hadlo luuqadaha kala duwan ee adduunka. Dhanka kale, 476-xubnood oo ka soo jeeda qabiilka reer-guuraaga ah ee Jarawa, oo iyana ku nool kayn aad u ballaaran oo u dhexeysa koonfurta iyo bartamaha Andamans, ayaa durba la raray oo ku go’doonsan qaybta ugu fog ee hawdka kadib markii uu faafay cudurka, sida ay saraakiishu sheegeen.
Kooxo ka kooban shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiir ayaa loo diray si ay usoo baaraan in kabadan 115 xubnood oo ka tirsan qabiilka Ongi ee iyagana kula nool hal jasiirad, sida uu sheegay Dr Roy. Xubnaha qabiilka Shompen ayaa sidoo kale la baari doonaa. Shaqaalaha gurmadka iyo shaqaalaha caafimaadka ee u safraya jasiiradaha ay ku noolyihiin qabiillada halka meel ka soo wada jeeda ayaa la rabaa in ay soo caddeeyaan oo iskasoo baaraan ‘Covid-19’ ka hor inta ayan safrin, waxaana la karantiilay hal toddobaad markii ay soo noqdeen. Dr Roy wuxuu sheegay in kiisaska “Covid-19” ee laga helay 10-kan jasiiradood aysan badnayn illaa hadda. Qabiilka Andamans ayaa waxay leeyihiin labo isbitaal, seddex xarumo caafimaad iyo 10 xarumood oo lagu daweeyo bukaanada Covid-19. Waxay sidoo kale leeyihiin mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee imtixaanka Hindiya.
Previous articleIsku-Buuqa Maskaxda Iyo Niyad Jabka (Mental Distress and Depression), Astaamahooda Iyo Dhibka Ay Keenaan
Next articleNeymar Muxuu Ka Yidhi Mucjisada Kulankii Xalay 5-ta Ciyaartoy Casaanka Lagu Siiyay?